आज धेरै पनि यी व्यवस्थाको क्षेत्रमा आफ्नै छैनन् भनेर थाह पाउँदा छैन, उपनगरीय क्षेत्रमा निजीकरण छन्। अर्डर देशमा को निपटान हकदार गर्न, तपाईंले पर्छ उपनगरीय क्षेत्र डिजाइन सम्पत्ति मा।
सुरु गर्न, हामी यस उपनगरीय क्षेत्र भनेर बुझ्न। यो आराम को नागरिक र बाली बढ्न भएको जमिन हो। को dacha मा आर्थिक र आवासीय भवन निर्माण गर्न अनुमति दिनुभयो। यो तपाईं यसलाई घर मा मात्र होइन निर्माण गर्न सक्छन्, तर पनि यसलाई मा निवास सही दर्ता गर्न एक बगैचा षड्यन्त्र भिन्न हुन्छ। बगैंचामा क्षेत्र दर्ता अधिकार बिना आवासीय परिसर निर्माण गर्न अनुमति दिएको छ। त्यसैले, बगैचा जायदाद को मालिक हो जसले धेरै नागरिक, गैर-मौलिक आवासीय भवन निर्माण। गर्दा एक गठन सम्पत्ति अस्थायी र, आवश्यक भएमा छलफल गरिनेछ, यो बोक्न सजिलो छ।
तपाईं स्वामित्व formalized छैन जो एक उपनगरीय क्षेत्र, किन्न प्रस्ताव भने, यस्तो सम्झौता गर्न जाने हुँदैन। पैसा र भूमि बिना बाँकी हुँदैन, यो उपनगरीय क्षेत्र को उचित डिजाइन सञ्चालन गर्न पहिलो विक्रेता सोध्नुहोस्। देशमा निजीकरण छ भन्ने तथ्यलाई, सम्पत्ति अधिकार राज्य दर्ता मा एउटा कागजात देखाउँछ।
के तपाईं "dacha क्षमादान" मा व्यवस्था को फाइदा लिएका छन् भने, मन राख्नुभएको सरलीकृत योजना अन्तर्गत डिजाइन उपनगरीय क्षेत्र 2015 सम्म अनुमति छ। साइट जीवित एक मौलिक संरचना छ भने, यो अवधि पछि तपाईं दस्तावेज स्वीकृत परियोजना बिना अवैध निर्माण को लागि राम्रो भुक्तानी गर्न हुनेछ। अनिश्चितकालीन सम्म योजना सरलीकृत भवन बिना उपनगरीय क्षेत्र बनाउने।
सुरु गर्न भूमि को निजीकरण देश र आवासीय भवन, तपाईं बागवानी वा dacha समुदाय को एक सदस्यता किताब गर्न आवश्यक छ। यो कागजात बिना उपनगरीय क्षेत्रमा असम्भव डिजाइन। पुस्तक हराएको छ भने, यो सहमतिलाई अध्यक्ष, पुस्तकहरू पुनर्स्थापना मा एक बयान उल्लेख गर्न आवश्यक छ। नयाँ "छुट्टी पार्टी कार्ड" तपाईं नियमित योगदान बनाउन र धेरै वर्ष को लागि एक देश अर्थव्यवस्था नेतृत्व संकेत जो अभिलेखीय कागजात, को आधारमा जारी गर्न सक्छ।
अर्को अत्यावश्यक को निजीकरण लागि कागजात भूमि देशमा प्रयोग गर्ने अधिकार पुष्टि स्थानीय अधिकारी मदत छ। यो सोभियत युग समयमा जारी एक धेरै पुरानो कागजात हुन सक्छ। यो प्रमाणपत्र मुद्रण गरिएको मुख्य कुरा। अनुसार संघीय व्यवस्था 137 र 122 संग, यो प्रमाणपत्र मान्य छ र जमीन आफ्नो दायाँ certifies। तपाईंलाई मदत छैन भने, सम्पत्ति अधिकार राज्य दर्ता आधार निम्न कागजातहरू मध्ये एक हुन सक्छ: स्थानीय सरकारहरूले देशमा प्रयोग गर्न स्थानान्तरण गर्न कार्य; सार्वजनिक अख्तियार द्वारा जारी साइट, गर्न शीर्षक को प्रमाणपत्र; व्यापार पुस्तकहरू देखि निकाल्न ispolkomovskaya।
उपस्थिति cadastral (भूमि पासपोर्ट) मा उपनगरीय क्षेत्र बनाउने गरिन्छ। धेरै कल पुरानो छ जो यस कागजात, -up उपनगरीय क्षेत्र, तपाईं सहमतिलाई को अध्यक्ष, बोर्ड मा प्राप्त गर्न सक्छन्। निर्माण को मामला मा सामान्यतया निर्दिष्ट छैन। तिनीहरूलाई legitimize गर्न, तपाईं निर्माण, आकार र षड्यन्त्र मा भवन को स्थान को सामाग्री व्याख्या गर्ने घोषणा अप कोर्नु पर्छ। बोर्ड पनि आवश्यक भएको उपनगरीय क्षेत्रमा विशिष्ट व्यक्ति नियुक्त गरिएको छ, र आफ्नो विवरण वास्तविकता गर्न पत्राचार अप गरेको राय प्राप्त छ।
तपाईंको गर्मी घरेलु एक आवासीय भवन छ भने, यो प्राविधिक सूची को ब्यूरो उसलाई एउटा पासपोर्ट प्राप्त गर्न आवश्यक छ।
सबै कागजात संकलन गर्दा, को उपस्थिति मा पहिचान कागजात, स्थानीय प्रशासन लागू गर्नुपर्छ। तपाईं (आदेश, कार्य) अनुमति सम्पत्ति को उपनगरीय क्षेत्र को लागि प्राप्त। यो कागजात संग, कृपया रूसी दर्ता स्थानीय शाखा सम्पर्क गर्नुहोस्।
आफ्नो हात तपाईं राज्य शुल्क भुक्तानी र प्राप्त गरेको मात्र पछि पूरा गर्न सकिँदैन संग उपनगरीय क्षेत्र बनाउने अधिकार को राज्य दर्ता को प्रमाणपत्र स्वामित्व को।
अदालत अघि सबै मुद्दाहरू समाधान गर्न दावी कसरी लेख्न
ठूलो परिवार प्रमाणपत्र कसरी प्राप्त गर्ने? ठूलो परिवार को व्यवस्था
कोट को Sverdlovsk क्षेत्र को शस्त्र। को Sverdlovsk क्षेत्र को काखमा को झण्डा र कोट
एक व्यक्ति रूपमा Crimea मा इन्टरनेट मार्फत कपन प्राप्त गर्न? प्रक्रियाहरु, सिफारिसहरू, र समीक्षा विवरण
Heraklion (क्रेते) - को Minotaur को जन्म ठाउ
संयुक्त स्टक कम्पनीहरु र आफ्नो फारम
कसरी प्लास्टिक बोतल देखि एक मौरी बनाउन: व्यावहारिक सल्लाह